xoogaga mucaaradka Syria oo beeniyay in ciidamada dawladda ay la wareegen qeybo kamid ah magaalada Allepo – The Voice of Northeastern Kenya
xoogaga mucaaradka Syria oo beeniyay in ciidamada dawladda ay la wareegen qeybo kamid ah magaalada Allepo
starfmke August 10, 2016
xoogaga mucaaradka Syria ayaa waxa ay beeniyen wararka ay sheeganaayan ciidamada dawladda iyo Hezbollah oo ka bar bar dagaalama ee ah in ay qabsadeen qeybo kamid ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka syria ee Allepo taas oo ay dhawaan qabsadeen xoogaga ka soo horjeeda jiritaanka xukumadda Madaxweyne Bashar Al Asad.
Hassan al-Eshra oo ah dagaalyahan ka tirsan kooxda Jaysh al-Islam xili u la hadlaayay televishanka Al Jazeera ayaa waxa u sheegay in magaaladaas ay gacantooda ku jirto iyaga iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda Dawladda Bashar Al Asad oo ay isla markaasina waxba ka jirin sheegashada dawladda ee ah in ay qabsatay qeybo kamid ah Allepo.
Fatah Halab ee ah isbahaysi ay ku bahooben dad mucaaradaya dawladda Syria ee u fadhigeeda yahay magaalada dimishiq ayaa waxa ay isbuuci aanu soo dhaafnay ka hortageen ciidamada daacada u ah madaxweyne Bashar Al Asad kuwaas oo hareereeyay magaalada Allepo.
Dhinaca kale kooxda dusha kala socota xadgudubyada ka dhanka ah baniaadanimada ee u fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in 9 ruux lagu dilay duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay diyaaradaha dawladda Syria ka geeysten magaalada Allepo.
Dagaalada Syria ayaa waxa ay ku bilaawden dibad baxyo nabadeed ee looga soo horjeeday xukumadda Bashar Al Assad biisha March ee sanada 2011-ka balse waxa ay durbaba isu badaleen dagaalo sokeye ee ka qarxay waddankaas oo aan kala joogsanin mudo shan sano ah waxana la sheegay in ilaa iyo hadda tirada dadka ku dhintay dagaaladaas ay kor u dhaafayaan 280,000 oo qof.
← Kinisu oo sheegay in ay dadka qaar doonaayen in ay shaqadiisa ka eryan
Kaptanka kooxda Swansea oo lagu wado in u ku biiro Everton →